जंगली Toro | शीर्ष स्लट साइट | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood withavery cartoon like set-up ofasmall town in Spain, त्यहाँ अंधाधुंध मानिसहरू एडी को पृष्ठभूमिमा वरिपरि रोमिङ संग छाप्राहरू राखिएका छन्. को स्लट को विषय मा आधारित छ साँढेको-झगडा जहाँ एक matador एक विशाल साँढेको साथ झगडे को स्पेन एक लोकप्रिय खेल. त्यसैले अवधारणा धेरै पटक matador को साँढेको वा उपाध्यक्ष-विपरित overpower गर्न प्रबन्धन त्यस्तो छ, पेआउट आफ्नो पर्स थपिनेछ. मान्छे को Muffled आवाज तपाईं एक व्यस्त शहर एक महसूस दिन पृष्ठभूमिमा सेट.
जंगली Toro स्लट को विकासकर्ता बारेमा
एल्क स्टूडियो Bloopers र जंगली Toro स्लट जस्तै खेल संग खेल उद्योग मा एक चिन्ह गर्न व्यवस्थित छ गर्नेहरूलाई विकासकर्ताहरूले मध्ये एक छ. विकासकर्ता यसको सञ्चालन चार वर्ष फिर्ता सुरु र सफलतापूर्वक वितरण गरेको छ 8 खेल अहिले सम्म. कम्पनी चाँडै तिनीहरूले प्रदान गेमप्लेको गुणस्तर देख डोमेन प्रगति गर्न जा रहेको छ.
यो सट्टेबाजी दायरा बीच पतन 0.20 यो अनलाइन क्यासिनो खेल मा. जंगली Toro स्लट को प्रतीक धेरै अद्वितीय छन्. तपाईं एउटा सुन्तला बीच मा एक चक्कु संग कटा छ, एक गुलाब, बैजनी रंग मा एक अलंकृत प्रशंसक र3सुन चाँदी र कांस्य विभिन्न सिक्का. त्यसपछि एक जंगली जंगली Toro प्रतीक को रील ठाउँ भर राखिएको पहेंलो रंग मा ढल्केको लिखित छ. को स्क्याटर एउटा सानो जुङ्गा संग क्रोधित matador छ. त्यसपछि त्यहाँ छ, को पाठ्यक्रम, खेलको हिड्ने जंगली सीङ र ठूलो दाँत हँसिलो तपाईं मा एउटा क्रोधित साँढेको छ. गुलाब तपाईं अधिकतम मूल्य उपज 1,000 एक knifed सुन्तला पछि क्रेडिट 500 सिक्का. छन् 178 जीत paylines.
जंगली प्रतीक लागि संयोजन विजेता बनाउन स्क्याटर लागि बाहेक सबै प्रतिस्थापन. जंगली प्रतीक संग एक payline उच्चतम भुक्तानी को दावा. जंगली Toro प्रतीक मात्र पाँचौ रील मा देखिन्छ. जंगली साँढेको एक हिड्ने जंगली रूपमा कार्य र प्रत्येक स्पिन संग तेर्सो उत्प्रेरित गर्छ. यसलाई उत्प्रेरित गर्छ रूपमा, यो Wilds गर्न सबै Matadors परिवर्तन र त्यसपछि पहिलो रील मा जंगली रूपमा settles. प्राप्त3दोस्रो को रील मा Matadors, तेस्रो, र चौथो रील निःशुल्क पुन स्पिन लागि खाताहरू. को Matadors आफ्नो ठाउँमा अडिग रहन र अतिरिक्त spins अर्को Matador को रील मा देखा आए.
जंगली Toro स्लट एउटा अचम्मको अनलाइन क्यासिनो बस क्यासिनो स्लट संग वरिपरि laze गर्न चाहने खेलाडीहरू खेल छ, र एक जोखिमपूर्ण एक खेल्न चाहँदैनन्. एल्क स्टूडियो, विकासकर्ता साँच्चै स्लट मा गेमप्लेको प्रभावित भएको छ.